"सरकारलाई सुझाव स्वीकार्य छ ,दबाब होईन" :- मन्त्री पण्डित – Kalika News
“सरकारलाई सुझाव स्वीकार्य छ ,दबाब होईन” :- मन्त्री पण्डित
२६ असार २०७६, बिहीबार २०:०५ , मा प्रकाशीत
असार २६ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कसैले संविधान विपरित माग गरे सरकारले त्यसलाई पुरा नगर्ने बताएका छन् । आज राजधानीमा ‘संविधानको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्सरचना’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन् । उनले बर्तमान समय सडकको भिडले सरकारलाई संविधान विपरित गएर दबाब दिईरहेको भन्दै उनले सुझाव स्वीकार्य हुने तर दबाब स्वीकार्य नहुने बताए ।
संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँदै उनले भने “हामी विधानलाई आत्मासाथ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । डाक्टरले अप्रेशन गर्न लाग्दा लिकति त दुःख छ नि रु अलिकति दुःख भन्दैमा अप्रेशन नै नगर्ने त ? डाक्टरलाई हामी भगवान मान्छौँ । तर मेरो जिउमा चलाउँदा मलाई नै सिध्याइदिन्छ कि भन्ने ठान्ने हो भने स्वास्थ जीवन हुँदैन । संविधानले नै पुनर्सरचनाको माग गरेको छ । नभए त संघीयता कार्यान्वयन नै हुने थिएन ।”
उनले संविधान मान्दैनौँ भन्न पनि नमिल्ने बताए । उनले केहीले पहिचान गुम्ने भने भन्दै हिडेको बताउँदै प्रश्न गरे “संविधान बनिसकेपछि कति पहिचान गुमेको छ ? संविधान भनेपछि पनि त पहिचान गुमेको छ । पहिलेकै पहिचान पक्रेर बस्ने हो भने संविधानलाई मानेको र अंगालेको हुँदैन । संविधानलाई मान्दैन भन्न मिल्छ ?” उनले भने । एक फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले सरकार र कर्मचारीबीच दुरी रहेको भन्दै यस्ता दुरी र मतभेदलाई समाप्त पार्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
मुखियाको परिवारलाई चितवन स्वरोजगार निर्माण संघको सहयोग